Nanomboka ny fanomanana ny fitsidihana ny iray volana ao, be dia be izahay mba handamina. Ny zavatra voalohany tsaroako dia ny tahotra. Ny tahotra ny tsy fantatra. Nandeha tany na aiza na aiza ary tsy misy ny iray. Nihaona Breziliana tovovavy ao amin’ny Internet, ary izany dia nanomboka ny drafitry ny diany. Izy dia mitondra ny olon-tiany aho ary ho an’ny olona tsy mbola nihaona fa izay nanome fahafahana ny hanatanteraka ny adala hevitra dia mba jereo Brezila ho inona izany. Saingy fantatro fa tsy afaka milavo lefona aho mafy aho dia hahomby, ary Andriamanitra no hamonjy ahy, satria tsy nanaraka ny nofy. Ary tsaroako koa ny fomba tamin’ny fiandohan’ny vanin-taona mafana nihazakazaka ao Park ary nandray ny valin-teny avy amin’ny Breziliana, fa izy dia vonona ny fialofana ahy ao Rio. Firy ny olona amin izany andro izany dia nahita ny rivotra twines Fifaliana tsy nahalala fetra) ny mahagaga ahy tanteraka tsy misy tahotra, afa-tsy ny fitsinjovana ny nofy marina. Tamin’izany fotoana izany aho dia efa nanao namana Breziliana, izay miandry ahy ho toy ny fialan-tsasatra ao an-tranonao. Azoko antoka fa Brezila no hitsena ahy ary dia tsy hanome fanafintohinana.
Ny olona faran’izay tsara fandray, tso-po sy tsara fanahy. Izaho efa nianatra ny Firenen-kafa, indrindra ao Eoropa, ary tsy nisy zavatra mba ampitahao. Ny breziliana dia ireo olona izay manambara ny tsy ianao ihany no ao an-trano, fa koa ny fanahy. Ary mangataka na inona na inona ho valin’izany. Ireo olona ireo dia tsy afaka ny tsy fitiavana sy ny hamaly) hitako Breziliana iray trano, ary na aiza na aiza aho no nandray ny maha-vavy na namana akaiky. Nisy fotoana, satria ny toe-javatra dia tsy maintsy mandeha irery, fa ny avy eo dia nisy olona vonona ny hanampy ahy. Satria hoy aho ny olona. Ary mazava ho azy, ny natiora sy ny voankazo. Ary ny rivotra iainana Breziliana, ny fahatsapana fifaliana nanenika ahy manontolo isaky ny andro. Mino aho fa any ho any, teny an-dalana ho any Brezila, dia very ny tahotra. Fantatro fa azo antoka fa efa tonga misokatra kokoa ny saina ary ho tsara fanahy aho, dia nahita namana be dia be nandritra ny»Brezila.»Indraindray aho dia mieritreritra aho fa bebe kokoa ny miandry any noho ny any Brezila, dia ny Breziliana) Eny, mazava ho azy. Tsaroako iray ny kilasy, dia hita ny valin ny fanontaniana izay dia nahemotra. Nandany fotoana be dia be ny manao mandroso ho amin’ny tutorial, ary ny Breziliana, fa mbola manana foana sisa zavatra ao amin’ny fomba fijery ny zava-tsarotra ny fifandraisana iraisam-pirenena, dia tsy mazava. Ary tsy dia ny olona izay mahafantatra ny andaniny sy ny ankilany amin’ny vola madinika. Foana aho ho tena feno fankasitrahana anao, mahalala izany. * Aho tsarovy ny mamaky ny tantaran ny tany Brezila, ary tsy mihevi-tena ho toy ny zava-drehetra dia ho avy amiko. TSY eo amin’ny fiainako sy tsy afaka mieritreritra fa rehefa afaka volana ny fianarana ny fiteny aho, dia ho tena tsara miteny sy hahatakatra na inona na inona teny. Amoron-dalana, ny Breziliana matetika aho efa mampamangy mikasika ny fanononana sy ny ankapobeny dia nanaja ny fahalalana) Iray dia nanontany ahy ny tsy hiteny ho azy amin’ny teny portiogey izy satria matahotra ny ho tia unrequited ho ahy. Mazava ho azy, ankehitriny, fa misy olona maro kokoa miandry ny fahatongavany, dia tsy misy antony ny tahotra) aho, mieritreritra aho nandany tsy ny herinandro, saingy ny volana. Tanteraka aho hoe manana ny rivo-piainana, ary nianatra tao anatin’ny fotoana fohy ny tanàna iray manontolo. Fanontaniana: raha misy olona nanontany ianao, dia ianao, manoro hevitra ahy ho toy ny mpampianatra ny teny portiogey. Mazava ho azy, mihevitra aho fa ny tsara indrindra mpampianatra ny zavatra sarotra ny mahita, satria tsy hametraka ny fanahinao amin’ny zavatra ataonao. Ho anao ny vokatra azo dia manan-danja sy ny fanoloran-tena. Fanontaniana: ary ny zava-dehibe indrindra, ny inona no tena tanjona tsy maintsy nandritra ny diany tany Brezila.
Ny fitiavana. Fanandramana vaovao.
Efa ela nofy
Ny tena tanjona izay nanosika ahy mba handeha any Brezila, dia ny fihaonana amin’ny malala, fihaonana tsy nampoizina satria izy nahalala na inona na inona, ary tamin’izany fotoana izany tsy miteny, fa ny ny fahatsapana mahery vaika ny ampy ho iray, mba hahatonga ny fahaverezan-tsaina ary mba hiampita ny ranomasina. Fisaorana ho azy, aho nahita ny fitiavana tsy manam-petra ho an’ny teny portigey. Tsaroako rehefa avy nihaona tamin’ny Breziliana, dia nijery aho na aiza na aiza noho ny fomba hianarana tsara tarehy ity language: malagasy amin’ny toerana samy hafa, alaina samy hafa ny fampiharana, ny fihainoana mozika. Ary avy eo aho nahita ny tolotra maimaim-poana mazava ho azy fa ny anarana, ary avy hatrany dia nanoratra taratasy. Izany zava-nitranga izany tsy nahy latsaka an-spam, ary ianao nahita azy ihany ny herinandro vitsivitsy. Tamin’ny fotoana ny Breziliana, nanapa-kevitra ny hanadino ahy, ary izaho nandao ny hevitra amin’ny fianarana teny. Rehefa tonga ny valiny izay tsy nangataka ahy aho raha mbola manana faniriana handray ny mazava ho azy na tsia, tsy nisalasala, fa nanapa-kevitra fa na inona na inona aho mba very, ary nanaiky. Tsaroako rehefa avy ny lesona voalohany, dia niresaka amin’ny Ankapobeny ny lohahevitra sy ny saina ahoana no mifanakaiky. Tamin’izay fotoana izay aho dia fantatro fa efa nahita ny mpampianatra, ny namana sy ny fanohanana eo amin’ny olona iray. Ho ahy dia toy ny famantarana ny hoavy, fa ny zavatra rehetra eo amin’ny fiainana no mitranga tsy mila manaraka ny foko. Indraindray aho dia mieritreritra fa tsy mahazo ny hafatra avy aminao tamin’izay fotoana izay aho dia tsy mbola nahita ny mahafinaritra izao tontolo izao ao Brezila. An-trano momba ny mpanoratra maimaim-Poana Nandoa fiofanana mazava ho azy fa ny zavatra Tariffs eo amin’ny fianarana ny Fanehoan ny mpianatra
← Mampiaraka toerana any Brezila afaka Mampiaraka ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana
Ahoana no mba hanambady ao Brezila ary hiaro ny tenany amin'ny fahadisoam-panantenana →